Myanmar Defence Weapons: Tunnel warfare(ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ရေ)
(ကျွှန်တော်တို့ဆိုက်အတွက် မိမိလေ့လာထားမှုများအား ပြန်လှည်၍ဖော်ပြခွင့်ပြုသော ကို ကျော်ဇော်လင်းအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ...။)
ေ၇ှ့ကမ္ဘာဦးအစက ပင် tunnels (ဥမင်လှိုင်ခေါင်း)များသည် လူသားတို့နဲ့.အတူတူရင်းနှီးကျွမ်း
များမှ့ကာကွယ်ရန် သဘာဝဥမင်လှိုင်ခေါင်းများတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုခေတ်
နည်းပညာများသည် လူသားတို့နှင့်အတူအဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာခဲ့ကြသည်။
Tunnel warfare(ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ရေး)သည် ဥမင် များက်ိုအသုံးပြုသောစစ်ဆင်ေ၇းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်၇ံ မြို့တွင်းစစ်ဆင်ေ၇းများနှင့်လည်း ဆက်နွယ်သည်။စစ်ရေးတွင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ရေးကို
အင်အားကြီးသောရန်သူကို ပျက်စီးစေရန် ခံစစ်တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ရန်သူကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း
တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းများများ ခံစစ်ကိုပြုလုပ်ကာ စစ်ဆင်နွဲသည်။ ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ရေးများ၏ အားသာချက်သည်
တပ်များကို စစ်မြေပြင်မှတခြား. .မမြင်နိုင်သောလုံခြုံသော..နေ၇ာသို့အလွယ်တကူပြောင်းေ၇ွ့နိုင်သည်။ စစ်မြေပြင်သို့လဲ.
ေ၇ှးခေတ် ကတည်းကပင်..ဥမင်းများကိုအသုံးပြုပီး. စစ်ဆင်ရေးအတွက်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။အကြီးမားဆုံးအနေဖြင့်
ဂျူး-ရောမ တိုက်ပွဲ(132–136 AD) တွင်လည်း ဂျူးများသည်.မြေအောက်ဥမင်များကို.အသုံးပြုကာ..တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
အလယ်ခေတ် (1100-1400AD)တွင် လည်း ဥမင်လှိုင်ခေါင်းများကို စစ်ရေးအတွက်.ခံစစ်များ မြိုးများ ၇ွာများ နှင့်.အုပ်ချုပ်ရေး
အဆောင်အုံးများ.တစ်ခုခုနှင့်တစ်ခု..ဆက်သွယ်ကာ.ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ထောက့်ပံရေး ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျို့ဝှက် ထွက်ပေါက်များ
အတွက်.လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။များသောအားဖြင့် မြို နိုင်ငံများသို့.တိုက်ခိုက်၇ာ တွင်.မြေရိုးခံစစ်.နံ၇ံ အထိေ၇ာက်အောင်.
.မြေအောက်တွင်လေးထောင့်ဘောင်များဖြင့်ထောက်ပီးတူးကာ.မြိုး၇ိုးအောက်သို့ေ၇ာက်သောအခါမိုင်းခွဲ မြို့ရိုးခံစစ်နံရံ မီး၇ှို့ကာ..ပြိုကျစေ၇န် စစ်ရေးတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
တရုပ်လေတပ်၏ မြေအောက် ဘန်ကာတစ်ခု
ကျွနိုပ်တို့၏မြန်မာ့သမိုင်းတွင်လည်း. ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ရေးကို.အသုံးပြုကာတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် သမိုင်းများ၇ှိခဲ့သည်။အလောင်းမင်းတရားဦးအောင်ဇေယျသည် ယိုဒယားသို့စစ်ချီတိုက်ခိုက်ရာတွင် ယိုးဒယားတို့..အယုဒ္ဒယမြို့တွင်မြို့ပိတ်၍ခံစစ် ဆင်သည်ကို..မြို့တွင်းသို့ေ၇ာက်မြေအောက်ဥမင်တူးပြီးဝင်ရောက်ကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
မြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ရေးကို..များစွာသောစစ်ပွားများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ပထမကမ္ဘာစစ်တွင် ဂျာမန် ပြင်သစ် ဗြိတိန်သြစတေးလျ တို့သည် မြေအောက်မိုင်းစစ်ဆင်ေ၇းများကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အမေ၇ိကန်နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းစစ်(1861 to 1865) ၊ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်.ဂျပန်တို့သုံးခဲ့သည်.မြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်း စစ်ဆင်ရေး မြောက်ကို၇ီးယား တောင်ကိုး၇ီယားစစ်ပွဲတွင်..မြောက်ကို၇ီးယားတို့သုံးပြုခဲ့သောမြေအောက်ဥမင်းလှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ေ၇း၊အမေ၇ိကန် ဗီယမ်နမ်စစ်ပွဲ၇ှိ ဗီယမ်နမ်တို့၏ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ေ၇းတို့သည်...မြေအောင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်ေ၇း၏သမိုင်းများပင်ဖြစ်သည်။
North Korean Tunnel Capability
မြောက်ကို၇ီးယားသည် ယနေ့ခေတ်သစ်အထိ မြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းစစ်ဆင်းေ၇းကို.အတွင်ကျယ်ဆုံးအသုံးပြုလျက်၇ှိသည်။
တောင်ကိုးရီးယားတပ်ဖွဲ့မှ တွေ့ရှိခဲ့သည့် မြောက်ကိုးရီးယားဥမင်လှိုင်ခေါင်း
မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်စက်၇ုံများ စစ်တပ်နှင်ဆိုင်သောအဆောက်အဦးများ သည် မြေအောက်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ရေတပ်အခြေဆိုက်များ ကိုလည်း ကုန်တွင်းပိုင်းအထိ မြေအောင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းများဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။မြေပြင်မှ့လေဟင်ပစ် ဒုံပစ်စင်များ ရေဒါများကိုလဲ..မြေအောက်ဥမင်များတွင်ထည့်သွင်းတည်ဆောင်ထားသည်။ တင့်ကားများကိုလဲ..မြေအောင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းကွန်ယက်များဖြင့်ပါတွဲဖက်တည်၇ှိထားသည်။
1974ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှ့စပီး 1990 မက်လအတွင်း စစ်မဲ့ဇုံတွင် ကြီးမားသောမြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းများကို တောင်ကို၇ီးယားစစ်တပ်မှ့၇ှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ထိုမြေအောင်ဥမင်းလှိုင်ခေါင်းများထဲမှာတစ်ခုမှာ
မြေအောက်အနက် 450ပေအထိနက်၇ှိုင်းစွာတည်ဆောင်ထားသည်။ထိုမြေအောက်ဥမင်လေးခုကို ၇ှာဖွေတွေ့နိုင်သောလည် မြေအောင်ဥမင်နှစ်ထက်မနည်းသော အခြားဥမင်များ၇ှိမည်ဟုသုံးသတ်ထားသည်။
၄င်းမြေအောင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းများသည် ဆိုလ်းမြို့အားကျူကျော်တိုက်ခိုက်၇န် အဓိက ဖြစ်ပေသည်။၇ှာဖွေတွေ့၇ှိသော မြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းများသည် တစ်နာ၇ီအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း10000 ခန့် တောင်ကို၇ီယားသို့ ၀င်ေ၇ာက်နိုင်သည်။
လေ့လာချက်များအ၇..ထိုမြေအောင်ဥမင်များသည် မြောက်ကို၇ီးယား၏တိုက်ခိုက်ေ၇းစီမံချက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။စစ်မဲ့ဇုံတစ်လျောက်ဝင် မြောက်ကို၇ီးယား တမ်မကြီး23မ၇ှိသည်ဟုလေ့လာချက်များအ၇သိ၇ှိ၇သည်။ထိုတပ်ဖွဲ့တစ်ခုစီမှ့ ကိုယ်တိုင်ဖောက်လုပ်ထားသော မြေအောင်ဥမင်လှီုင်ခေါင်းများအခြေနေကို ပြန်လည်တင်ပြ၇သည်။ ထိုအချက်အ၇ မြေအောင်ဥမင်ပေါင်း 23ခု၇ှိနိုင်ပီး ထိုတပ်မကြီး23 မမှ့ တစ်နာ၇ီအတွင် တောင်ကို၇ီးယားသို့ ၀င်ေ၇ာက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း၇ှိသည်၊ ပြုယမ်မြို့၏အတွင်းေ၇ာအပြင်ပါ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် လက်နက်ကြီးအမြောက်ဒဏ်မှ့ကာကွယ်နိုင်၇န်မြောက်များစွာသော မြေအောင်ဥမင်းလှိုင်ခေါင်းများကို ပြုလုပ်ထားသည်။ထို ဥမင်လှီုင်ခေါင်းများသည် တိုက်ခိုက်မှုမှ့ကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် ပြန်လည် တိုင်ခိုင်နိုင်နိုင်၇န်လည် တည်ဆောက်ထားသည်။
တရုပ်တပ်မတော်၏ နူကလီးယားဒုံးလက်နက်များ သိုလှောင်ရာဥမင်လိုင်ခေါင်း
ဥပမာအနေဖြင့် အမြောက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခု သူ၏ပစ်ခတ်နေသည်နေ၇ာအပေါက်မှ့ဥမင်လှိုင်ခေါင်းထဲမှာတဆင့်အခြားပစ်ခတ်နိုင်သော အပေါက်နေရာသို့ပြောင်းေ၇ွ့ကာ ပြောင်းလဲ့ပစ်ခတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားသည်။ထိုအပေါက်များသည်လည် ဒီဂ၇ီအမျိုးမျိုးကိုပစ်ခတ်နိုင်သည်။အတိအကျပစ်ခတ်နိုင်သောခေတ်မှီလက်နက်များ၏ အန္တရယ်မှ့ပင် မြောက်ကို၇ီးယားနိုင်ငံ၏မြေအောင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းများသည် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။မိုင်ပေါင်းများစွာ၇ှိသော မြေအောက်ဥမင်ကွန်ယက်များသည် ဘန်ကားများနှင့်တွဲဆက်ထားပီ အထဲတွင်စစ်သားနေထိုင်စားသောက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ဘန်ကာများသည် သံမဏီ ကွန်က၇စ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပီ အခြားသောဘန်ကာများဖြင့်လဲဆက်သွယ်ထားသည်။ထိုကြောင့် လှု့ပ်၇ှားမှုကိုလျော့ကျစေပီ ထောက်လှမ်းနိုင်၇န်ပိုမိုခက်ခဲ့လှပေသည်။မြောက်ကို၇ီးယား၏ ဓာတုလက်နက် သုသေသနနေ၇ာများသည် တောင်မျာများကိုဖောက်၍ပြုလုပ်ထားသော မြေအောင်ဥမင်များတွင်တည်၇ှိသည်။
ထိုအဖျက်စွမ်းအားကြီးလက်နက်များကို.ခံနိုင်ရည်၇ှိရန်.ခံစစ်များ လေယာဉ်များ၊ဗျူဟာမြောက်လက်နက်များ..command and control center များကို.မြေအောက်ဥမင်များတူကား မဟာဗျူဟာမြောက် တည်ဆောက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုသိုသော မြေအောင်ဥမင်းများကိုတိုက်ခိုက်၇န်လည်းအမျိုးမျိုးသော လက်နက်များကိုလည်တီထွင်တည်ဆောင်လျုက်၇ှိပေသည်။
(ref from:wiki,A HISTORICAL ANALYSIS OF TUNNEL WARFARE AND THE CONTEMPORARY PERSPECTIVE)